Maamulka Degamada Xingalool ee Gobolka Sanaag oo la gudoon siiyay Deeq ah Matoorada Ceelka | maakhir.com
Maamulka Degamada Xingalool ee Gobolka Sanaag oo la gudoon siiyay Deeq ah Matoorada Ceelka
Xingalool:- Maamul Goboleedka Puntland ayaa maanta waxa uu deeq isugu jirta Matoorada Ceelka iyo toobiynka Biyaha soo saara waxa uu gudoon siiyay Maamulka Degmada Xingalool, Deeqdaasi ah Matoorada Ceelka ayaa waxa bixisay wasaarada arimaha gudaha ee Maamulka Puntland iyada oo ah Deeqdii ugu horay oo ay bixiso Wasaaradu tan iyo intii la Magcaabay.
Wasiirka Arimaha Gudaha ee Puntland C/rashiid Barqadle Warsame ayaa qabalbkaasi gudoon siiyay Gudoomiyaha Degmada Xingalool Yuusuf Faarax Siciid oo goobtaasi joogay,waxana uu sheegay wasiirku inay Degmada Xingalool mudan tahay in Qalabkaasi la gudoon siiyo,taasi oo uu sabab uga dhigay ceelkii Magaaladaasi oo mudo fadhiyay.
Wasiirku waxa uu sheegay in qalabkaasi lagu soo iibiyay aduun lacag ah oo dhan 3000$ kuwaasi oo Dalka dibadiisa laga dalbay ka dib markii la arkay baahida guud ee Deegaankaasi iyo qayla dhaanta soo baxaysa oo ah Biyo La”aanta baahsa.
Intaasi ka dib ayaa waxa isna halkaasi ka hadlay Gudoomiyaha Degamada Xingalool Yuusud Faarxa Siciid (Carblaawe) oo mahada balaadhan u soo jeediyay Maamulka Puntland waxa uu sheegay Gudoomiyugu inay Magaalada Xinaglool mudo ceelkeedu xumaa oo aan si fiican looga cabin jirin.
Gudoomiyuhu waxa kaloo uu sheegay inuu ceelkaasi Degmada Xingalool ahaa mid ay si wan uga cabi jireen dad badan oo ku xidhnana Ceelkaasi kuwaasi oo ka soo kicitimi jiray Magaalooyinka ku dhaw oo dhan.
Deeqdan Matoorada ah ee la gudoonsiiyay Degamada Xingalool ayaa waxay ku soo aadaysaa xili ay soo baxayaan qaylo dhaan Ba”an oo laga sheegay Guud ahaan gobolka Sanaag taasi oo ku aadan Abaaro xoogan oo Deegaankaasi ku dhuftay.
« Prof Muxiyadiin Cali Yuusuf oo booqday gooba badan oo ku yaala Magaalada Bosaaso
C/laahi Yuusuf farta ku fiiqay inay Dalka Somaliya joogaan Al-Qaacida »